Fantaro ireo mpandresy tamin’ny fifaninanana bilaogera Kenyana · Global Voices teny Malagasy
Fantaro ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana bilaogera Kenyana
Voadika ny 17 Jolay 2018 5:15 GMT
(Marihina fa tamin'ny 29 Jona 2012 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny Global Voices dia nanolotra maimaim-poana ho an'ireo bilaogera enina mipetraka any Kenya ny fahafahana nanatrika ny Vovonana ho an'ny Fampitam-baovaon'olontsotra Global Voices 2012.
Mba hifaninanana amin'ny iray amin'ireo sehatra enina dia tsy maintsy manoratra lahatsoratra bilaogy ahitana teny miisa 500 na latsaka momba ny lohahevitra hoe “Ahoana no fomba ahafahan'ny fampahalalam-baovaon'olontsotra manampy amin'ny fiarovana ny fifidianana am-pilaminana 2012-13 any Kenya” ireo bilaogera Kenyana.
Afomanga tao Mombasa, Kenya (Okt, 2005) Sary avy amin'i Zahir Mirza tao amin'ny Flickr (CC-BY-2.0)
1. Evalyn Githina
“Raha mitondra vaovao, fitaovana sy loharanom-baovao marina isika hanamafisana ny fandrakofana ataontsika dia afaka manao zavatra betsaka mba hahazoana antoka fa maharay vaovao tsara ny olom-pirenena rehetra momba ny dingana sy ny olana. Hery ny fahalalana ary mila mahazo antoka isika fa manao izany izay rehetra te-handray anjara. Rehefa mahazo hery kokoa ny olom-pirenena dia tsy atahorana loatra izy ireo ny ho voafitak'ireo izay mikasa hanao izany amin'ny fampiasana herisetra mba handrenesana ny feon'izy ireo. “
Vakio eto manontolo ny lahatsoratr'i Evalyn .
2. Kenneth Mwangi
“Tsy nahafa-po ny Kenyana ny fampahalalam-baovao mahazatra nandritra ny fifidianana farany satria tsy nahavita namaha ny fihenjanana teo amin'ny ankamaroan'ny vahoaka izy ireo ary nanilika ny vokatr'izany. Ny fanomezana sehatra manokana ho an'ireo politisiana vitsy an'isa no nataon'izy ireo, izay nanararaotra nampiasa izany mba hampielezana fankahalana sy herisetra. Afaka manao ny mifanohitra amin'izany ny fampahalalam-baovaon'olontsotra. Afaka mitantara avy amin'ny fomba fijerin'ny vahoaka tsy tapaka ny fampahalalam-baovaon'olontsotra satria raha araka ny hevitro dia fahatsapana ny fiainan'ny firenena no zava-dehibe. “
Vakio eto manontolo ny lahatsoratr'i Kenneth .
3. Baron Shitemi
“Ny mahafinaritra amin'ny famahanana bilaogy dia ny fahafahan'ny olona mamaky eny rehetra eny miaraka amin'ny finday misy aterineto. Hiresaka momba izany izy ireo na aiza na aiza. Hizara izany amin'ny namany sy ny mpanjohy azy ireo izay ao amin'ny media sosialy. Mahatalanjona ny tambajotra entin'izany. Izany dia manome ny fahafahana tsy manam-paharoa amin'ny famoronana sy fanohanana ny fiovana . “
Vakio eto manontolo ny lahatsoratr'i Baron .
4. Moses Wasamu
“Afaka mandray anjara mavitrika amin'ny fanomezana antoka antsika ny fifidianana am-pilaminana ny fampitam-baovaon'olontsotra satria mahafantatra tsara kokoa ny toerana honenany izy ireo, fa tsy toy ny mpanao gazety mahazatra izay sambany no alefa any amin'ny toeram-piasana lavitra indrindra mba handrakotra ny fifidianana. Mahafantatra azy ireo kokoa ny olona ao an-toerana”
Vakio eto manontolo ny lahatsoratr'i Moses.
5. Steve Banner
“Any amin'ny fanorenam-ponenana tsy ara-dalàna sy any ambanin-tanana toa an'i Kibera, izay nahitana ny herisetra mafana taorian'ny fifidianana dia nanampy tamin'ny fanangonana sy ny fizarana vaovao ny fitomboan'ny fitateram-baovaon'olontsotra. Noho izany dia lasa fitaovana tena ilaina izany mba hampielezana ny hafatra ho amin'ny fandriampahalemana teo amin'ireo tanora, izay matetika no lasibatr'ireo mpanao politika amin'ny fanatanterahana ny fikasan-dratsiny sy ny herisetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina. “
Vakio eto manontolo ny lahatsoratr'i Steve.
6. Ephraim Kenyanito
“Raha mbola maro ireo Kenyana no misalasala raha toa ka hisy tokoa ny filaminana mandritra ny fifidianana ao Kenya ny taona 2012-13 dia miezaka mandrisika ny fampitam-baovaon'olontsotra ny vondrom-piarahamonina antserasera mba handray anjara mavitrika amin'ny fandrisihana ny fifidianana am-pilaminana fa tsy mitatitra fotsiny ihany ny valim-pifidianana . “
Trohy eto manontolo ny lahatsoratr'i Ephraim.
Ny Toniandahatsoratra GV any Afrika Atsimon'i Sahara Ndesanjo Macha, ny Mpanorina ny Bilaogy Kenyana Webring Daudi Were , ary ny Lehiben'ny Toniandahatsoratra GV Solana Larsen no nitsara ny fifaninanana. Arahabaina! Ary misaotra an'ireo rehetra izay nandray anjara.
Fiteny 3 herinandro izay
Afrika Atsimo 3 herinandro izay